Homeसमाचारहे’र्नुहोस यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
May 29, 2021 admin समाचार 4464
काठमाडौँ- नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शनि’बारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तो’केको छ । सार्वजनिक विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११५ रुपैयाँ ६१ पैसा र बि’क्रीदर ११६ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ ।
बेलायती पाउ’ण्ड एकको खरिददर १६३ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १६४ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एक’को खरिददर १४० रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १४१ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको छ । कतारी रियाल एकको खरि’ददर ३१ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुन देशको मुद्रा’को दर कति ?
पटक पटक पिसाब ग’इरहनुपर्ने सम’स्या छ ? छ भने खानुहोस भि’जाएको चना
एउटा खुट्टै छैन तर यस्तो राम्रो नाच्छिन् यी गोर्खालि चेलि (हे’र्नुस् भिडियो)
January 3, 2022 admin समाचार 845
आजभोलि सा’माजिक संजाल अन्तरगत विभिन्न किसिमका संजालहरू छन्। जसअन्तर्गत हाम्रो परिबेश’मा फेसबुक अत्यन्तै लोकप्रिय संजाल नेटवर्क भित्र पर्छ। सर्वाधिक जनसंख्याले यो संजा’लभित्र जोडिएका छन्। त्यसगरी प’छिल्लो समय यता टिकटक पनि सर्वाधिक रुचाइएको सामाजिक संजाल भित्र
November 6, 2020 admin समाचार 7981
काम खोज्न दुबइ गए तर काम पा’एनन्, श्रीमती सँग मागेको २० हजारले एक झ’ट्कामा करोडपति बनायो
June 3, 2021 admin समाचार 3851
कसको भाग्य क’तिबेला बदलिन्छ भन्ने कसैलाई थाहै हुँदैन । यस्तै भएको छ एक भारतीय किसानलाई, जसले पहिले काम न”पाएर अरुको भरमा बाँच्नु’परेको थियो । उनी एक झट्का’मा ४५ करोड रुपैयाँको मालिक भएका छन् ।गल्फ न्यूजको